मियामी आनन्द - Zhuji Feihu वस्त्र मशीनरी कं, लिमिटेड
मियामी balmy breezes एक पर्यटक तातो स्थान छ, र अचम्मको sunsets धेरै संग एक महानगरीय शहर हो गर्न प्रस्ताव. शानदार समुद्र तट कला डेको condos देखि, मियामी एक यात्रु स्वर्ग छ.
यो तथाकथित जादुई शहर आफ्नो अचम्मको कला लागि विशेषता एक महानगरीय मा हुर्केका छ, संस्कृति, नाइटलाइफ, र खाद्य पदार्थ र पेय. भ्रमण गर्न धेरै सुन्दर ठाउँ र त्यसो गर्न त सानो समय, यो पुस्तिका कहिल्यै यो जादुई शहर आफ्नो छुट्टी बनाउन महत्त्वपूर्ण जानकारी तपाईंलाई प्रदान गरेर आफ्नो सर्वश्रेष्ठ छुट्टी तयार गर्न मद्दत गर्नेछ, तपाईं कहिल्यै बिर्सन कुरा.
मियामी भ्रमण गर्न उत्तम समय
जबकि मियामी यसको न्यानो र ट्रपिकल weathers द्वारा विशेषता छ, यसलाई आफ्नो न्यानो तर दलदली देखि मार्च र मे बीच मियामी भ्रमण गर्न सबै भन्दा राम्रो छ. यदि तपाईं यात्रा गर्दै छन् बजेट मा, यात्रा गर्ने सबै भन्दा राम्रो महिना सेप्टेम्बर मार्फत जुन छन्. ती महिनामा होटल दर तल आएको गर्छन, र पनि केही रेस्टुरेन्ट कम आफ्नो शुल्क. जबकि मौसम ती महिनामा थप आर्द्र छ, मियामी सूर्य चमक छ रूपमा सधैं व्यवसायको लागि खुला रूपमा लामो छ.
मियामी मा वरिपरि रही
मियामी मा वरिपरि रही यो फ्लोरिडा मा सबै भन्दा राम्रो सार्वजनिक यातायात प्रणाली छ रूपमा राम्रो सजिलो छ. तपाईं आफ्नो सजिलो कार्ड बहु-टिकट अनलाइन प्राप्त र मियामी चासो धेरै ठाउँमा भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ.
तपाईं सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं ट्याक्सी लिन सक्छ. ट्याक्सी एक थप शुल्क छ $2.50 हरेक पिक-अप र देखि दायरामा आफ्नो मूल्यहरु $30 गर्न $60.
तपाईं एक कार भाडामा चाहनुहुन्छ भने, आफ्नो सबै भन्दा राम्रो विकल्प मियामी सेन्ट्रल स्टेशन छ, हवाई अड्डा को निकट. उद्धृत गर्न एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा एक कार भाडामा आफ्नो योजना पार्किंग जटिल गर्न सकिन्छ कि छ भने. केही होटल पनि आफ्नो कार पार्क गर्न स्थानहरू प्रस्ताव छैन र आफ्नो कार पार्क गर्न ठाउँ पाउन जब तपाईं, तपाईं पार्किङ मीटर मा एउटा हेर्ने राख्न छ.
जहाँ मियामी मा रहन
मियामी आफ्नो यात्रा समयमा बस्न ठाउँ प्रशस्त छन्. तपाईं बीच दृश्य रमाइलो गर्न चाहनुहुन्छ भने, त्यसपछि मियामी र दक्षिण बिचका होटल आफ्नो नम्बर एक विकल्प हो. के तपाईं Downtown मा होटल चयन गर्नुपर्छ भनेर बस्ने शहर रुचि भने, डिजाइन जिल्ला, र साना हवाना. तपाईं पनि नरिवल Grove र कोरल gables भ्रमण गर्नुपर्छ
सर्वश्रेष्ठ स्थानहरू मियामी मा भ्रमण गर्न
मियामी अद्भुत आकर्षण र भ्रमण गर्न स्थानहरू भरिएको छ. चाहे तपाईं समुद्र तट मा एक दिन खर्च, पूर्ण दिन किनमेल खर्च, वा पार्क मा प्राकृतिक अन्वेषण, मियामी मनोरंजन छ सबैको स्वाद लागि अवसर. तपाईं हाम्रो शीर्ष सिफारिसहरू पाउन सक्नुहुन्छ तल
दक्षिण बीच – मियामी आफ्नो यात्रा सम्पन्न तपाईं दक्षिण बीच भ्रमण सम्म छ. समुद्र तट मा एक दिन खर्च देखि, किनमेल गर्न, डेको कला अन्वेषण, र यहाँ partying, आगंतुकों तिनीहरूले खोजिरहेको सबै पाउनुहुनेछ.
Everglades राष्ट्रिय निकुञ्ज– alligators एक खोक्रो नदी छ, सांप, crocodiles, र चरा को सबै प्रकार. यो एक airboat टुर वन्यजन्तु हेर्न प्रवाहको मा आगंतुकों लिन्छ कि प्रदान गर्दछ.
चिडियाघर मियामी – यो चिडियाघर मा, तपाईं विश्वभरिबाट सबैभन्दा आकर्षक प्राणीहरू हेर्न सक्षम हुनेछ. रूख kangaroos देखि, meerkats, koalas, र तेंदुआ, चिडियाघर मियामी भन्दा बढी घरहरुमा 2,000 जंगली जनावरहरु एक cageless वातावरणमा.
विज्ञान को मियामी संग्रहालय – विभिन्न वैज्ञानिक क्षेत्रहरू को एक किसिम संग, यो संग्रहालय हात-मा र अन्तरक्रियात्मक प्रदर्शन को एक ठूलो संख्या प्रदान गर्दछ.
मियामी मा किनमेल
कुनै कुरा आफ्नो स्वाद र शैली, के तपाईं कहिल्यै मियामी मा सपना देख्यो सबै पाउन सक्नुहुन्छ. तपाईं सपिङ्ग spree सबै भन्दा राम्रो ठाउँ योजना छ भने तपाईं Lincon रोड मल हो जाने गर्नुपर्छ, वाशिंगटन एवेन्यू, र मियामी.
मियामी सर्वश्रेष्ठ खानेकुरा र पेय
मियामी र आफ्नो नयाँ विश्व फ्युजन भोजन धेरै फरक संस्कृतिका साथ, खाने आनन्द छ. यसको भोजन फ्लोरिडा देखि व्यञ्जन ल्याउँछ, क्यारेबियन, र ल्याटिन अमेरिका. लोकप्रिय Tacos र टेख-मेख देखि ल्याटिन अमेरिका पोर्क पकवान र popusa chicharrón खाना एल साल्भाडोर लागि पनीर र विविध fillings संग भरी एक मकै tortilla.
feihu कपडा मिसिन लिमिटेड द्वारा
अघिल्लो : प्रेम सियोल
अर्को : हङकङ महसुस